Ukwenziwa komtshato kwamehlo aluhlaza: isithunzi somtshakazi onamehlo aluhlaza
Kukho ukucinga ukuba zonke iindawo ezintle zokuzikhangela, zifunde ngokungaqhelekanga ukusebenzisa i-mascara nge-eyelashes kunye ne-lipstick, zizama izimonyo, zixhomekeke ngenyameko kwelinye leentsuku ezibalulekileyo ebomini babo-usuku lomtshato. Kwaye kukho ingqolowa ye nyaniso kule: kumtshakazi konke kufuneka kuphelele-zombini inwele, kunye ne-manicure, kwaye kunjalo, ukwakheka!
Umlobokazi omlingo ohlaza-isihloko esikhethekileyo kwingxoxo. Ehlabathini kukho kuphela i-1-2% yabantu abanamehlo enombala ococekileyo! Ngokugqithiseleyo kukho imimandla eyahlukileyo yamehlo aluhlaza-oluhlaza-oluhlaza-oluhlaza okomhlaza. Kungakhathaliseki ukuba kwakungubani, umntu onobuhlaza unzima ukungaziboneli - oko kukhangelekile kwaye kukhangele amehlo akhe amangalisayo.
Umakoti onamehlo aluhlaza, ngoncedo lwezonyongiso, abe yinto enhle ngakumbi? Ngokumalunga neempawu ezahlukileyo zomtshato owenziwe ngamehlo aluhlaza kunye nobuchule bokuphunyezwa kwayo, isihloko sethu siya kuxela.
Umlenze womlobokazi onamehlo aluhlaza
Zonke iziqhelo kunye nemigangatho yomfanekiso wakhe womtshato intombazana kufuneka icinge kwangaphambili, ngokuba umtshakazi uyidayimane efumana isinqabileyo esixabisekileyo ngosuku lomtshato.
I-Cosmetics iya kugxininisa sonke isithunzi sobuso kuphela xa usibeka kwisiseko esilungileyo - isikhumba esicocekileyo sempilweni. Yingakho ukwamkela i-cosmetologist yomtshakazi ozayo kufuneka kubhalwe okungenani inyanga enye phambi kwesi siganeko, kuba le yithuba elincinci onokuyiphatha ngayo kwaye uvuselele kakhulu ubuso bakho.
Iingcali zikhetha iinkqubo eziyimfuneko, ziqwalasele iimfuno zomntu ngamnye wesikhumba somthengi. Ukujongana nokucoceka, iinkqubo ezininzi ze-aceling peeling, ikhosi ye-microcurrents kunye ne-mesotherapy imisebenzi yemimangaliso - isikhumba esilungele kakuhle siya kukhanya, kwaye ukutshatyalaliswa kwamnandi kuya kubuya kwiidama.
Ubugcisa bokuzenzela buzalwe, mhlawumbi, kunye nokuqala kwexesha lomntu onengqiqo. Abafazi ngeenkulungwane baye baqonda isayensi yokuphucula ubuhle babo ngoncedo lweendlela eziphuculweyo. Sinokuningi esinokukufunda namhlanje. Iimfihlelo kunye neendlela zokumisa ziya kufumaneka kwinqaku lethu eliyintloko.
Ukongezelela, intombazana kufuneka iqikelele kwangaphambili ukuba ngubani oza kukhwaza ngosuku lwakhe lomtshato - ngaba uya kukwazi ukwenza ngokwakhe okanye kungcono ukuba afune uncedo kumculi owenza ulwazi? Kuye kwenzelwa ukunyusa okusemthethweni "kwiphonsa", kukufanelekile ukuqhuba isambatho somdlalo womtshato iintsuku ezimbalwa ngaphambi komtshato - "zama" ukulungiswa komtshato, i-styles and accessories.
Ukuba isigqibo senziwe ukuba uguqulwe, kufuneka uzikhusele kwizihlwele ezidangeleyo, ezinokukwazi ukuphazamisa indlela yokuzonwabisa, oko kukuthi uthenge iimpawu zokuhlola eziphezulu. Emva koko i-mascara ayiyi kuwela kwaye ayiyi kuhamba, i-lipstick ayiyi kubuthela emlonyeni kwimisipha, kwaye isiseko sonke imini siya kuqina ebusweni.
Xa umtshato wesigqibo unqunywe ukuba uphathwe kwizakhono, zonke iinkcukacha kunye nenkosi nazo zixutyushwa kwangaphambili: umculi wokwenza iimfuno kufuneka abonise umfanekiso wesigqoko somtshato ukuze akhethe uhlobo olulungeleleneyo lomsebenzi wokwenza; awukwazi ukulibala malunga nekhwele nge-manicure, ngaphandle kokuba akunakwenzeka ukwenza umfanekiso opheleleyo womtshakazi. Ewe, ukuba le ntombazana ikwazi ukufumana abaphathi abaza kuyinyamekela ubuso kunye neenwele ngomso womtshato, kwi-salon efanayo - baya kuba nako ukudala ngamabini, kwaye umtshakazi uya kuba ngummangaliso kangangoko.
Ukuba, ngomhla womtshato, umtshakazi uya kumnika amehlo asemthunzini ocacileyo, egqoke ii-lens zokudibanisa, kufuneka azise umculi wakhe wokwenza oku malunga nalo, kuba le mfihlelo encinci ingakwazi ukuguqula umfanekiso wonke kwaye, ngokufanelekileyo, i-makeup.
Iifake zamehlo aluhlaza
Ukwenza ngokuphumelelayo, okwenza i-glare ibonakale. Ngoxa uncedo lwezonyiso, umfazi onamaqabunga obomvu unokuguqulwa ngaphaya kokuqaphela! Yingakho abanini bebala elihle lamehlo kufuneka baqonde ubugcisa bokuzenzela kwiinkcukacha ezincinci.
Ukwenziwa komtshato kumantombazana onobuhlungu obumnyama
Ukulungelelaniswa okusemthethweni kumabhuleki anamehlo aluhlaza kugqithwa kwaye "kubeka phezu kweesheluli" ukuba kuthobeke - izimonyo zokuzibhenela kufuneka zenze ubuhle bomtshakazi bube bubala ngakumbi kwaye bugqibeleleyo.
Amehlo aluhlaza obumnyama obumnyama, ngokuxhasa umculi ozenzayo, unako ukufumana iimvavanyo ezinzima kwiinguqu zobuso bakhe.
Nazi iziphakamiso ezisisiseko zokwenza i-makeup yomtshato kwintombazana enamehlo aluhlaza ngobunwele obumnyama:
Kuyamkeleka ukuba isiseko se-makeup sisumnyama ngaphezu kombala wendalo wesikhumba (kungekhona ngaphezu kwe-1 ithoni!). Isiseko sokwenza "i-tone-to-tone" iya kuba yinto enhle kakhulu yokudala uqobo lwezobugcisa.
Iintama zendalo ezibuhlungu zamehlo aluhlaza ziya kuboniswa ngepereach kunye ne-apricot.
Ukukhetha i-palette yamazithunzi ezinamehlo aluhlaza, umtshakazi onomnyama kufuneka alahle ukuthozama nokungaqiniseki - ngosuku lwakhe lomtshato kufuneka abe yintyatyambo eqaqambileyo yokubhiyozela! Ngoko ke, ama-artificial artists ancoma ukuba bajonge i-shades zesiliva, i-violet ecebileyo, i-emerald okanye i-chocolate.
Ukungqinelaniyo "umgcini we-mv" ekwenzeni umtshato - amehlo aluhlaza, ngokugqithiseleyo ugxininiswe yi-podvodkoj - ngoko kukhangeleka kuya kuba yinkcazo kunye nokucacisa. Zombili izambatho ezingaphezulu kunye nezantsi ziso ziziswa.
Xa ukhetha i-mascara nge-eyelashes inyaniseka kwii-classics-kufuneka ibe mnyama. Kungcono ukuhlala kwinguqu ekhuselekayo yamanzi eyandisa umthamo.
Ngomthunzi we-lipstick, akufuneki kubekho ubunzima, kuba umakoti onamabala aluhlaza unokuningi okukhethayo - i-cherry, i-coral okanye imilomo eluhlaza iya kuba yinto ebalulekileyo yokugqiba umtshato. Ukuba unqwenela, ungasebenzisa ngisho ne-lipstick egcwala umbala we-fuchsia, emva kokuqinisekisa ukuba umlomo owenziwe nguye awuyikuphazamisa ukukhanya kwemehlo yomlobokazi.
Oku kubalulekile! Amantombazana abathanda ukutyefisa, kukulungele ukuyeka izithunzi ezimnyama okanye zizisebenzise kakhulu. Ngaphandle koko, uvuyo lwezithombe zomtshato luya kugutywa yizinto ezigqwesileyo ngobuso bomtshakazi.
Ukuze uhlale ubamba imibono enomdla, umfazi onomsila obumnyama kufuneka aqonde indlela yokwenza izinto ezihlangabezana neempawu ezibonakalayo zokubonakala kwakhe. Kwizinto ezithile zokwenza i-brunette, siya kuthetha ngale nqaku.
Ukwenziwa komtshato kumantombazana onenwele ezimhlophe
Umfanekiso womyeni ohlaza-zlatovska umlingo oluhlaza, uthinta, kwaye, mhlawumbi, ungento engokoqobo. Enyanisweni, efini elincinci, i-satin okanye i-organza, enekhanda elimangalisayo kwiintloko zakhe, intombazana enamehlo agqatshelwe ngokukhawuleza, iya kukhumbuza ngokukhawuleza umthendeleko ojikelezayo, owahla evela kumaphephancwadi ayithandayo. Kubalulekile ukuba usebenze ngenkuthalo, ukuze ungabi nesisindo kwaye ungagcini umfanekiso omhle wesilungiselelo somtshato esifanelekileyo.
Nazi iimfihlelo zentsebenzo yokwenza ngokuphumelelayo ukuba wazi umlobokazi onobumba obomvu:
Isiseko sinokuthi sinye kunye ne "ithoni" yesikhumba okanye i-lighter.
Emahlathini omtshakazi kunye nohlobo olujongene nolwandle olugqithiseleyo.
Iimvumba, ezikumantombazana ezinwele ezimhlophe aziqhelanga ngokucacileyo, ziziswa ngeepensile ebomvu ngokubhekiselele ekukhuleni kweenwele zendalo. Ngendlela, ifom efunwayo inikwe iilishi 1-2 iintsuku ngaphambi kokubhiyozela.
Ukugxininiswa ekwenzeni kwenziwe, ngokwemvelo, kumbala omhle we-iris - bazama ukwenza oku ngakumbi ngakumbi. Ukhetho lokuphumelela luhlobo lwabaxhasi - ukudibanisa kwabo okuvisisanayo akuyi kwenza kuphela ukubonakala ngathi kuvulekile, kodwa kubonakala kwandise amehlo. Isimo esibalulekileyo ngumthunzi ocacileyo wezithunzi. Inkophelo yeselula ihlanganiswe ngethunzi le-emerald elityebileyo, ngoko amehlo asetyenziswa ngenyameko kwinqanaba elingaphandle kweso ngeli "izithambile ezimanzi" kunye nokukhuthaza umda phakathi kwezi ntyatyambo ezimbini. Isiphumo esimangalisayo sinokufezekiswa ngokuzama ukusebenzisa iiflethi zeperele kunye nepereletti. Umgca wokugqibela ngumnyama okanye umnyama omnyama.
Umgca wokugqibela wokuguqulwa komnini wamehlo aluhlaza uba ngepinki epholileyo ekhanyisa emlonyeni wakhe. Uya kunika umfanekiso wobungqina kunye nokukhohlisa ngexesha elifanayo.
Ubuso bentombazana enobumnandi obuye bendiyeke imibala ekhanyayo - ngokuqhelekileyo ama-blondes athola amaqabunga angafaniyo kunye ne-eyelashes. Ukuze ukhanyise kwaye uyicacise, usebenzisa izimonyo zincinci, kufuneka ukwazi imigaqo embalwa yokwenza i-makeup.
Ukwenza umtshato ngeenwele ezimnyama ezinamehlo aluhlaza
Ukwenzela umtshato ngamehlo aluhlaza wesinwele esinebhantshi ibomvu sinokudlala kunye nokukhawuleza, ukunika amehlo omtshakazi inqaku lekati. Ukwenza oku, ujonge ngamehlo, usebenzisa i-palette ecebileyo yezilumbiso.
Ubume obuchanekileyo beelishi luyinxalenye ebalulekileyo yomfanekiso ochanekileyo. Ukuze "udwebe" iinki, abesetyhini abanamakhanda abomvu baya kufuna i-pencil eqinile okanye ibhendi yegrey. Nangona kubalulekile ukuba uzalise ngokucophelela zonke iindawo apho iinwele zincinci kakhulu, kubaluleke kakhulu ukuba ungadluli.
Ikhoneni elingaphakathi lelihlo lidwetswe ngombala ocebileyo, ngokukhawuleza ulimnyama ukuya kwikona yangaphandle yexesha elihambahambayo, apho umthunzi wezithunzi uguqulwa ube yinto engcolileyo. Ngombulelo kule nhlanganisela ehlukeyo, "ubuqili" buya kuhlala phambi kwamehlo, kwaye umbono uya kuzuza oko kubizwa ngokuthi ukuthandana. Ikhosidi ephantsi iyancwatshwa ngokutyhulwa kwegolide eline-shaded okanye ezethusi.
Ukuze kube nempembelelo enkulu, i-eyelashes idutywe ngamascara amnyama. Ukuba le ntombazana idibana nokubonakala kwayo ngaphezu kokubonakala kwayo, i-eyelashes yobuxoki kufuneka ibekwe eceleni. Ngabo, umakoti akanakuziva ekhululekile, kwaye ubuhle obubonakalayo buya kuhlambalaza ngexesha elibi kakhulu.
Emlonyeni wesifazane obomvu obomvu, umlomo okanye ukukhanya kwimibala yonke yombala we-terracotta ibonakala imangalisayo.
Yenza umtshato wentombazana eneenwele ezimvu
Abantu abanomvumba obomvu bahlala bekhanga inzala yabanye - bayabonakala eqaqambileyo kwaye engeyona into encinci. Iingqombela ezibomvu kunye nobumnyama obudakazelayo ukudansa kwi-iris yeso sisipho esihle kakhulu semvelo. Abafazi abaneembonakalo ezinje baye bavulelwa kwiinkulungwane zeengcamango malunga nobugqwirha. Kwaye namhlanje ubuhle obomvu obunobomvu buhlanganiswe kwi-halo yemfihlakalo kunye nobuxoki - yintoni ekhona, kulo mlilo umtshingo?
Iifake zamehlo omdaka
Nangona ukuba umbala ombala omdaka unomyinge omkhulu wabantu behlabathi, abafazi abanamehlo abomdaka abagodli! Amehlo amhlophe atyhidiweyo angenza umnikazi wakhe anqabile kwaye unomdla kakhulu. Wonke umfazi kufuneka azi ngeemfihlelo zokuguqulwa kwesiguquguquko.
Ngokuhlanganisana okusebenzayo kwee-shades kwimibala yamabhinqa anjalo, abalingisi bamathandayo bayathanda ukusebenza: ubuncinci benzame - kwaye ubuhle bubukeka buhle kakhulu! Kwi-arsenal yezimonkco zamehlo aluhlaza okwebomvu ngokuqhelekileyo zisebenzisa imibala enemibala yemithunzi - igolide, i-emerald, ithokoleta okanye i-asphalt emanzi. Ngexesha elifanayo, isiseko sokwenzelwa kukhanya kwaye kukhanya. Ngesikhumba esiluhlaza somlobokazi obomvu obomvu, ubuchule obusondeza amehlo abukeka bembonakalisa ngokwenene!
I-Mascara ikhethwa emnyama okanye emdaka. Umbala ogqithiseleyo womlomo, owugcizelela kakuhle ubuhle bamehlo, uya kuba yi-coral okanye i-caramel.
Sincoma ukuba ujonge iifoto zomtshato owenziwe ngamehlo aluhlaza apha ngentla: mhlawumbi, enye yezinto ozikhethayo uza kuzalisa ibhanki yakho yobuhle!
I-Honeymoon kunye nemizila yefestile
Ukutshata ngomhla kaValentine
Imibono yokwenza umtshato ngomlobokazi othandekayo
Kabini ujoyine umlambo womtshato
Umtshato ogqithiseleyo - kwiibini eziqinileyo
Umkhwenkwe womtshato kwi-wedding anniversary
Impembelelo ye-aromas emzimbeni womntu
Ukugonywa kwe-infection pneumococcal for children
Ukuxilongwa okungafaniyo kwe-virus ye-viral hepatitis
Indlela yokubhaka ikhefu elimnandi kwi-multivark: iresiphi yesinyathelo-nge-nyathelo ngesithombe
Isaladi esuka kwi-Peking iklabishi kunye nesiliva esidliwayo
Jonga ngqo naluphi na
U-Murad noNataliya Osman baye baqala inkwenkwezi kwi-Lamboda Lyca kwiprojekthi yothando "Ndihamba"
Indwangu yamatye emhlophe etafileni
Isobho sePatato ngeeeks
I-pie nge jam
UVgeni Plushenko wabonisa unyana wakhe endala
Isobho se-broccoli isobho
Umzimba wakwamanye amazwe endlebe kunye ne-pharynx